ကူးစက်ရောဂါ တွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ရှားဇောင်းလက်ပတ် – Shwe Yaung Lan
HomeHealthကူးစက်ရောဂါ တွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ရှားဇောင်းလက်ပတ်
ကူးစက်ရောဂါ တွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ရှားဇောင်းလက်ပတ်
July 30, 2021 SYL Health 0
ဆန်းြ ကယ်ထူးခြား ရှားစောင်းလက်ပပ်ဖျော်ရည်အစွမ်းများ
ရှားစောင်းလက်ပပ် (၁)ပိသာ(၂၀)ကျပ်သား၊ ရေ(၁၀)လီတာ၊ သကြား(၂၀)ကျပ်သား၊ သံပုရာသီး(၁၀)လုံး၊ နှမ်းဆီစစ်စစ်(၁၀)ကျပ်သား၊
ရေ(၁၀)လီတာ ကို ပွက်အောင်ကျိုပြီးနောက် ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်သား(၁)ပိသာ ၂၀ ကျပ်သားအား ရောကျိုချက်ပါ..အပေါ်ယံတက်လာသည့်အမြှုတ်များအား ဇွန်းဖြင့် ခပ်ထုတ်ပါ…အမြှုပ်များကုန်သည့်အခါ…
သကြား(၂၀)ကျပ်သား၊ ဆားနှင့် နှမ်းဆီစစ်စစ်(၁၀)သားရောထည့်ကျိုပါ….နာရီဝက်ခန့်ကျိုပြီးလျင် သံပုရာသီး(၁၀)လုံးအရည်ညှစ်ပြီးထည့်ပါ…(ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလျင် တပါတ်ခန့် ခံပါတယ်…) နှမ်းဆီစစ်စစ်မရခဲ့လျင် မထည့်ပဲ ကျိုနိုင်ပါတယ်…
ရှားစောင်းလက်ပပ်ဖျော်ရည်သည် အသဲကို အားကောင်းစေပါတယ်…အမြင်အာရုံကောင်းစေပါတယ်…ယခုအချိန်အထိ မျက်မှန်မတပ်ရသေးပါ.. ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်…
ယခုရှားစောင်းလက်ပပ်ဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးနိုင်ရုံသာမက…မျက်နှာကိုလည်း လိမ်းနိုင်ပါတယ်…ဝက်ခြံတင်းတိတ်၊ မှဲ့ခြောက်ပျောက်ပါတယ်…ဆံပင်ဉီးရည်ထဲသို့ အုန်းဆီလိမ်းသလိုလည်း လိမ်းနိုင်ပါတယ်…ဆံပင်ဖြူသက်သာစေပါတယ်…ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်….သွားကိုက်လျင် ခံတွင်းအနံ့မကောင်းလျင် ပလုပ်ကျင်းနိုင်ပါတယ်….ခံတွင်းအနံ့သက်သာစေပါတယ်….
မိန်းကလေးတွေအနေနှင့် နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ဖျော်ရည်အား နှုတ်ခမ်းတွင်လိမ်းပြီးမှ ဆိုးလျင် အရောင်စိုတောက်နေတဲ့ အလှတွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်,,,
ခြေဖဝါးကွဲအက်ခြင်းဖြစ်လျင် အဆိုပါဖျော်ရည်လေးအား ညအိပ်ခါနီးဝါဂွမ်းဖြင့် တို့၍ လိမ်းအိပ်ခြင်းဖြင့် ၅ ရက်အတွင်း ခြေဖဝါးကွဲ သက်သာစေပါတယ်….
ရှားစောင်းလက်ပပ်မှာ အစွမ်းထက်တဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင့် ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ အရာတွေ ပါဝင်သည့်အတွက် အရေပြားဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ free radicals တွေကို ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းစေပြီး အရွယ်ကို နုပျိုစေတဲ့ အစွမ်းရှိလှပါတယ်,,,
collagen ထုတ်ပေးတဲ့ ဆဲလ်တွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့အတွက် အရေပြားကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းတွေကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ပရိုတင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပပ်မှာ polyphenolsလို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေဝင်ရောက်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်..ဉာဏ်ရှိ သလို ချဲ့ထွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မှတ်သားမိသမျှ မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
Mask တပ်ပါ…လက်မကြာခဏဆေးပါ..လူစု လူဝေးရှောင်ကျဉ်ပါ…အိမ်ထဲမှာ နေထိုင်ပါ…တရားထိုင်ပါ..ပုတီးစိတ်ပါ…ရာသက်ပန်သရဏဂုံတည်ပါ…
အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ…အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ စားသုံးပါ…ဂျင်းပြုတ်ရည်သောက်ပါ,,,ရှားစောင်းလက်ပပ်ဖျော်ရည်သောက်ကြပါ….
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်တွေ အတိုင်း လိုက်နာ နေထိုင်ကြပါရန် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ၊ တပည့်သားသမီးများအား တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ်ပါတယ်….